दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग रहेको ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा पहिलोपटक नेपाली महिलालाई समेत भर्ती गरिने भएको छ । सन् २०२० को वसन्त ऋतुसम्म नेपाली महिलालाई ब्रिटिस सेनामा अवसर प्रदान गर्न लागिएको हो ।
पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् ।
अफ्रिकामा अलपत्रमध्ये २ घर फर्किए
अमेरिका जान भनी घरबाट २२ महिनाअघि हिँडेका र अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया पुगेर अलपत्र बनेका २३ नेपालीमध्ये २ जना बुधबार नेपाल फर्कने भएका छन् ।
डा.केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै राँको फालियो
१८ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा खलंगामा नागरिक संघर्ष समितिले राँको फ्याँकेर सरकारको विरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग अयोग्य पूर्वलडाकुको ७ बुँदे माग
अयोग्य पूर्वलडाकुहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेनासरह एकमुष्ठ आर्थिक प्याकेज दिनुपर्नेलगायत माग राखी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
इजरायलले आफ्नो स्थापनाको ७० वर्ष र मसाभ (इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय) को स्थापनाको ६० वर्षको कार्यक्रममा लागि छुट्याएको रकम असहाय बालबालिकाको लागि उपयोग गरेको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब २ सयको चट्याङका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वी झापादेखि रूपन्देहीसम्मको क्षेत्र चट्याङ अति प्रभावित हो ।
सनम शाक्यको हत्या र हराएको ३३ केजी सुनको अनुसन्धान गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको म्याद सकिएको छ । चैत ३० मा मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय समितिको म्याद सोमबार रातिदेखि सकिएको हो ।
बेलाबखत जादु हेर्न भीडभाड हुने गोरखाको पुरानो बसपार्कमा सोमबार छुट्टै चहलपहल थियो । दर्शकले नि:शुल्क मनोरञ्जन लिइरहेका थिए । कलाकार पैसा पर्दैन नि:शुल्क नाटक हेर्नुस् भन्दै चिच्याउँदै थिए ।
द्वन्द्व पीडितलाई ३ करोड ४७ लाख
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित, मृतक लगायत द्वन्द्व पीडित परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले ३ करोड ४७ लाख राहत वितरण गरेको छ ।
फरक संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ : उपसभामुख
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सबै जातजातिले फरक संस्कार र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बनारसमा बन्धक बनाइएका दुई महिला फर्किए
भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको बनारसमा बन्धक बनाइएकी बर्दियाका दुई महिला मंगलबार विहान फर्केका छन् । मधुवन नगरपालिकाकी ३२ र २८ वर्षिया ती महिला भारतको रुपैडिहा हुँदै यहाँ आएका छन् ।
नेकपाको महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि जित्नुपर्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशन/अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
कांग्रेसद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिका विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
मण्डलामा नयाँ शक्ति र नेविसंघको विरोध प्रदर्शन
नयाँ शक्ति पार्टी र नेविसंघले माइतीघर मण्डलामा छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीले मण्डलामा मात्रै प्रदर्शन गरेको थियो भने नेविसंघको झण्डासहितको जुलुस नयाँ बानेश्वर चाेक नजिकसम्म पुगेको थियो । दुवै प्रदर्शन सरकारले डा. गोविन्द केसीको अनशन प्रति देखाइरहेको रवैया निरंकुशतामाथि केन्द्रित थियो ।
धरान उपमाहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको उपचारको क्रममा मंगलबार निधन भएको छ । विगत एक सातादेखि 'सिभियर' निमोनिया भएपछि काठमाडौंको धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार गराइरहेको सुब्बाको बिहान ११ बजे निधन भएको हो ।
विषालु च्याउ खाएर फेरी एकको मृत्यु, एक सातामा एकै वडाका तीनको ज्यान गयो
बिषालु च्याउ खाएर घोराही उपमहानगरपालिका १९ पाँचपोखरीका ४० वर्षीय चित्रबहादुर घर्तीको मृत्यु भएको छ । सोमवार बेलुका नजिकैको जंगलवाट च्याउ ल्याएर खाएपछि गम्भीर विरामी परेका घर्तीको उपचारका क्रममा मंगलबार विहान कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँकेमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एकै दिन बाँडियो एक करोड !
समाज कल्याण परिषद्ले आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३३ वटा संघ/संस्थालाई हचुवामा एक करोड रुपैयाँ दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री एवं परिषद्की अध्यक्ष थममाया थापाको निर्देशन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ९९ लाख ७५ हजार रकम असार अन्तिममा बाँडिएको हो । रकम पाउनेमा धेरैजसाे मन्त्री थापा निकटका संस्था भएकाे स्राेतकाे दाबी छ ।
डा. केसीका प्रतिनिधि भन्छन्, 'वार्ताको वातावरण नै बनेन, सरकार पेलेर जाने रणनीतिमा छ'
जुम्लामा १८ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेको डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी बार्ता टोलीबीच मंगलवार औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले २६ वटा गैंडा मरेका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार जुँधेर, बच्चा जन्माउन नसकेर, बाढीले बगाएर र बुढो भएर ती गैंडा मरेका हुन् ।
पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कोशीमा भन्दा पहिला नारायणी नदीमा पानी जहाज चल्ने बताएका छन् । मंगलबार सौराहामा पर्यटकीय बस सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सिसडोलमा फोहोरको डाँडो [फोटोफिचर]
नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइट चुलिएसँगै राजधानीका सडक, चोक र घर–घरमा फोहोरको डंगुर थुप्रिन थालेको छ । ल्यान्डफिल साइटमा बनेको ‘फोहोरको पहाड’ भास्सिन थालेकाले सातायता काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट फोहोर बोकेर पुगेका टिपर ‘फोहोरको पहाड’ चढ्न सकिरहेका छैनन् ।
नक्कली अंशबण्डा गरी जग्गा बिक्री
सरकारले रोके पनि कारोबारीले चोर बाटोबाट धमाधम जग्गा प्लटिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले अंशबण्डाको नाममा जग्गा बिक्री गर्ने चोर बाटो समातेका हुन् । सरकारले अंशबण्डा र अति आवश्यकतामा मात्रै वर्षमा एकपटक एक कित्तासम्म खण्डीकरण गर्न सकिने नीति ल्याएपछि अंशबण्डा गर्न लगाएर प्लटिङ गराउन थालिएको छ ।
मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन
मापदण्ड पूरा नगरी अवैध ढंगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका एक सञ्चालकले आइतबार आवश्यक कागजपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । पालुङटार नगरपालिका–१ खोप्लाङको माई मनकामना क्रसर उद्योग सञ्चालकले कागजपत्र बुझाएका हुन् ।
करार तथा ज्यालादारीमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीले मंगलबारदेखि सरकारी कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारी कार्यालयले औपचारिक रूपमा निष्कासनको निर्णय नगरे पनि उनीहरूलाई मंगलबारदेखि कार्यालय नआउन सूचित गरिसकेका छन् ।